Soo dejisan SoundCloud 2016.11.15 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: SoundCloud
SoundCloud – software ah si ay u helaan in ay adeegga music caanka ah. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad ka raadin iyo dhegaystaan ​​walxuhu muusikada oo kaydinta daruur, ku dar kuwan raadkaygay in playlist, raac waxyaabaha cusub iwm SoundCloud waa shabakad music ah bulshada, taasoo keeneysa in Listen and View macluumaadka ku saabsan kuwan raadkaygay audio ka mid ah kuwa kale ee isticmaala, comment ama saamiga iyaga. Sidoo kale SoundCloud u saamaxaaya in ay Customize .Wadashaqayntaas xogta fursadaha gaadhsiin, iyo in ay ku xirmaan Wi-Fi. SoundCloud kuu ogolaanayaa inaad si ay u qoraan kuwan raadkaygay ku dhawaaqa iyo dhajinayaan on Facebook, Twitter, Tumblr oo afargeesood.
Search Advanced iyo dhagaysiga muusigga kala duwan
Waxay abuurtaa Playlists ah
Kartida nalugu updates ee dadka kale ee
Records iyo tiirarkeedii kuwan raadkaygay audio ee shabakadaha bulshada caan
Soo dejisan SoundCloud
Faallo ku saabsan SoundCloud
SoundCloud Xirfadaha la xiriira
Humble Bundle – barnaamij software ah oo lagu soo dejiyo ciyaaraha la soo iibsaday iyada oo loo marayo adeegga caanka ah. Softiweerku wuxuu siinayaa awood aad ku aragto liistada waxyaabaha la soo iibsaday iyo sidii loo cusbooneysiin lahaa haddii loo baahdo.
Browser caanka la xawaaraha sare ee bogga loading. Sidoo kale software sir gaadiidka si ay u difaacaan saamayn dibadeed.
Lucky Patcher – softiweer waxaa loogu talagalay in meesha looga saaro xaqiijinta laysanka, xannibinta xayeysiinta, la beddelo rukhsadaha lana dejiyo boodhka barnaamijyada lagu rakibay taleefanka casriga ah.